हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारले खोस्दै, जग्गा प्लटिङ पनि गर्न नपाइने « Naya Page
काठमाडौं । तपाईको नाममा कति जग्गा–जमिन छ ? कतै तपाईसँग हदबन्दी भन्दा बढी त जग्गा छैन ? यदि बढी जग्गा छ भने अब तपाईले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कसैको नाममा भए जफल गर्ने भएको छ ।
यस्तै कृषियोग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री पूर्णरुपमा अन्त्य गरिने बताएका छन् । उनले मंलबार विनियोजन विधेयक, २०७५ माथि भएको छलफलमा बोल्दै ‘जग्गा कारोबार व्यवस्थित र यसलाई राज्यको कर प्रणालीमा समाहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताएका हुन् । यस प्रणालीबाट जग्गा कारोबारमा अदृष्य रुपमा बिचौलियाबाट सर्वसाधारण ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भूमिलाई भूमाफियाबाट जोगाउन अनुमति लिएर वा नलिई कृषि योग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने कार्यलाई पूर्ण नियन्त्रण गरिने स्पष्टपारे । इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्र जग्गाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था भूमि नीति र भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको उनले सदन समक्ष राखेका छन् ।
बागमतीमा नेकपा (एस) का राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दै, आजै यी तीन मन्त्रीको शपथ